Phyu Phyu, Author at Intern Plus
Author: Phyu Phyu
Internship ဆင်းတဲ့အခါ Company ကြီးတွေမှာဆင်းသင့်သလား? Startup တွေမှာ ဆင်းသင့်သလား?
Internship ဆင်းတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာ ဆင်းရမလဲဆိုတာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် စဉ်းစားရကျပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာ intern ဆင်းတာ ကိုယ့်အတွက် ပိုကောင်းမလဲဆိုတာသိရဖို့ အောက်ကအချက်လေးတွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။...
Internship ဆင်းဖို့အတွက် First year ကတည်းက စတွေးပါ။
Internship ဆင်းတယ်ဆိုတာ အခုလျှောက်လိုက်လို့ အခုရသွားနိုင်တဲ့ Process မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Candidates ဘက်ကကော၊ Employer ဘက်ကကော သေချာအချိန်ပေးရတဲ့ Process...
Candidates, Career Paths, Marketing
Organizations တွေ၊ Company တွေဟာ Business decision တွေချဖို့၊ New Products တွေထုတ်ဖို့၊ Investment အသစ်တွေလုပ်ဖို့၊...
Account Executive ဆိုတာခုနောက်ပိုင်းမှာ အခေါ်များလာတဲ့ position တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Account Executive တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ AE တစ်ယောက်ရဲ့...